Taratasy fisaorana avy amin'ny Fikambanana 'Atrika-Vonona'
Fisaorana mitafotafo avy amin'ny Fikambanana Atrika sy Vonona ao Ambalanjanakomby, distrikan'i Maevatanàna.tohiny
Fisaorana avy amin'i Hervé Donatien mivady
Miarahaba antsika mianakavy e ! Indro alefa eto ny teny fisaorana ho anareo rehetra, tsy fidin-tsy avahana, izay niombom-po sy fanahy tamin’ny fianakaviana tamin’ny nahalasan’i RATAMINJANAHARY Edmond, papako. Tena feno ny fonay ary nahazo hery sy nitraka tokoa fa manan-kavana marobe dia ianareo... tohiny
Fankalazana ny Fetim-pirenena ao amin'ny foiben'ny masoivoho.
Amin'ny alahady 25 jiona amin'ny 6 ora hariva izany ny fotoana hankalazantsika ny Asaramanitra eny amin'ny foiben'ny masoivoho, via Riccardo Zandonai 84, Roma.tohiny
Tarika Ndriana Ramamonjy handalo eto Roma
Tarika Ndriana Ramamonjy handalo eto Roma - Italia Anatin'ny fankalazana ny faha 30 taona niderana an'Andriamanitra an-kira Ny alahady 4 juin 2017 amin'ny 5 sy sasany tolakandro Fratelli del Sacro Cuore Centro Fratel Polycarpo Via dell'Imbrecciato, 112a 00149 , ROMA - ITALIA Hisy sakafo hariva... tohiny
Giornata del Madagascar 2017 any Torino
Am-pifaliana no hanasana ny Malagasy manodidina an'i Torino, na ny avy lavitra sendra mandalo, amin'ny fankalazana ity andro natokana hiresahana momba an'i Madagasikara ity, izay karakarain'ny Fikambanana " Malagasy Miray " : sabotsy 27 mey 2017 manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny "Casa... tohiny
'Festa dei Popoli' any Brescia.
Amin'ny alahady 14 mey ho avy izao ny fankalazana ny "Festa dei Popoli" any Brescia, izay hatao ao amin'ny Pala Brescia, via San Zeno 168. Asaina isika rehetra, na ny monina ao amin'ny faritra manodidina na ireo sendra mandalo na maniry hanao faran'ny herinandro any. Tongava mitsidika ny trano... tohiny
'Un biscotto per l'Africa', hisy kilongantsika ihany koa handray anjara.
Ho antsika any Arezzo sy ny manodidina indray ity. Miendrika fifaninana hampandraisana anjara ny zaza sy ankizy - ampian'ny ray aman-dreny na tsia - hanamboatra "biscotti" any an-trano ka io no entiny ao amin'ny ny sabotsy 25 martsa ho avy izao hanomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny... tohiny
Asaina indrindra isika any avarabaratra any, Brescia sy ny manodidina, hanotrona ity hetsika/famelabelarankevitra mitondra ny lohahevitra hoe " Nessun discorso di odio " ity, izay handraisan'i Lydie Andriamiseza anjara fitenenana. Lydie moa dia isan'ireo mitondra avo ny fampahafantarana ny... tohiny
Efa maromaro ihany angamba no mahalala ny hazakazaka Maratona eto Roma isan-taona ka amin'ity taona ity dia ny 2 aprily no hanaovana azy. Ankoatra io dia misy koa ny "Fun Run - La Stracittadina", hazakazaka maivana sady fialamboly manivatsiva an'i Roma anaty 4 kilaometatra sy sasany - izany hoe vao... tohiny
Amin’izao volana manokana ho an’ny “Firaisan’ny Kristianina” sady ho “Fifampiarahabantsika” amin’izao taona vaovao izao. Dia manainga antsika Malagasy tapaka sy namana rehetra, amin’ny fiombonam-bavaka iraisam-pinoana ny: Alahady 29 janoary 2017 Toerana ao amin’ny Parrocchia Santa Maria Della... tohiny
Amin'ny Finoana sy Fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana fa i Miandra Alison BEZAKA, pretran'ny diosezin'Antsiranana, dia nodimandry ny alatsinainy 23 janoary 2017 teo amin'ny faha 58 taonany, rehefa nahafeno 30 taona naha-pretra azy. Ho entina any Antsiranana anio... tohiny